Unai Emery Oo Fariin Hanjabaad Ah U Diray Tottenham Kahor Kulanka Adag Ee Premier League
Arsenal iyo Tottenham ayaa wada dheeli doona kulan ciyaareed aad u adag, kaasi oo ka tirsan tartanka xiisaha iyo xamaasada badan ee Premier League. Kulan ciyaareedkaan ay wada dheelaan naadiyaddani oo loo yaqaano Darbiga Waqoyga London…
Arsenal Oo Guulaha Premier League Sii Wadata Xili Ay Si Dirqi Ah Uga Badiyeen Bournemouth
Arsenal ayaa si dirqi ah waxay uga badisay dhigeeda Bournemouth kulan ciyaareed qayb ka ahaa tartanka xiisaha iyo xamaasada badan ee Premier League. Dheeshaan oo ka qabsoontay qalcada kooxda laga badiyay ayaa daqiiqadihii loo qorsheeyay…
Tottenham Oo Burbursatay Chelsea Xili Ay Dhabarka U Saarisay Guuldaro Aad U Xanuun Badan
Abdirahman	 Nov 24, 2018
Kooxaha Tottenham iyo Chelsea ayaa wada dheelay kulan ciyaareed aad uxiiso badan, kaasi oo qayb ka ah tartanka Premier League ee wadanka Ingiriiska. Dheeshii dhex-martay kooxahani oo ka qabsoontay qalcadda Spurs ayaa kusoo dhamaatay…
Manchester United Iyo Crystal Palace Oo Barbardhac Ku Heshiiyay Kulan Ka Tirsanaa Premier League
Kooxaha Manchester United iyo Crystal Palace ayaa wada dheelay kulan ciyaareed aad u adkaa, kaasi oo qayb ka ahaa tartanka Premier League. Labadaan kooxood ayaa ciyaartooda waxay ka qabsoontay qalcadda Old Trafford oo ay ku dheesho naadiga…
Kooxaha Premier League Oo Mowqif Cad Ka Qaatay In VAR Lagu Adeegsado Kulamada Horyaalka
Kooxaha ka dheela Premier League ayaa cod aqlabiyad leh waxay ku meel-mariyeen in aalada VAR lagu isticmaalo kulamadda horyaalka xili ciyaareedka dambe. War saxaafadeed kasoo baxay EPL-ka ayaa lagu sheegay in talaabadani ay meesha ka…
Pep Guardiola Oo Ka Hadlay Hadii Uu Jiro Xifaaltan Gaar Ah Oo Kala Dhaxeeya Tababare Kooxeed
Pep Guardiola wuxuu kamid yahay macalimiinta ugu wanaagsan ee waqti xaadirkaan ku dhexda jirta saaxada kubadda cagta, inkasta oo dadka qaarkood ay rumeysan yihiin inay yihiin midka ugu fiican. Macalinka Manchester City ayaa deriskooda Man…
Xherdan Shaqiri Oo Shaaciyay Kooxda Xili Ciyaareedkan Ku Guuleysan Karta Horyaalka Premier League
Gooldhaliyaha naadiga Liverpool ee wadanka Ingiriiska, ciyaaryahan Xherdan Shaqiri ayaa kalsooni xoogan ka muujiyay inay kooxdiisa ku guuleysato xagaagan Premier League. Reds ayaa nan muddo badan gacanta ku dhigin EPL, laakiin markii ugu…